विराटले बनाए नयाँ कीर्तिमान, कसको रेकर्ड ताेडे? - Everest Dainik - News from Nepal
विराटले बनाए नयाँ कीर्तिमान, कसको रेकर्ड ताेडे?
काठमाडौंः भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले एक नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध वान डे क्रिकेटमा सर्बाधिक रन बनाउने क्रिकेटरको कीर्तिमान बनाएका हुन् ।
कोहलीले आज १९ रन पूरा गरेसँगै यो उपलब्धि हासिल गरे । यो उपलब्धि हासिल गरेसँगै उनले पाकिस्तानका पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादादको २६ वर्ष पूरानो कीर्तिमान भंग गर्न सफल भएका छन् ।
वान डेमा मियाँदादले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध ६४ खेलमा १९३० रन बनाएका थिए । विराटले भने वेस्ट इन्डिजविरुद्ध ३५ खेलमै १९३० रन बनाए ।
ट्याग्स: कीर्तिमान, वान डे क्रिकेट, विराट कोहली